Shooting Master 3D 4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Shooting Master 3D
Shooting Master 3D ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့သေနတ်ထိန်းချုပ်ပါနှင့်ဤ 3D ဂိမ်းအတွက်အဆုံးစွန်ပစ်ခတ်မှုမာစတာဖြစ်လာဖို့အားလုံးကိုပစ်မှတ်ပစ်ချ။ ကတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအတားအဆီးအရာဝတ္ထုအရှိန်, ပျံ, အလှည့်နှင့်အတူခက်ခဲရ။ အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း-ရုပ်ပစ်မှတ်၏အမှု၌, တစ်ဦးဦးခေါင်း, shot နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးဂိုးသွင်း။ ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ထိပ်ရမှတ်များနှင့်အတူရွှေတံဆိပ်အနိုင်ရ။ ထူးခြားတဲ့ပစ်မှတ်၏ပါဝင်သောအသက် 30 အဆင့်ဆင့်နှင့် 10 သေနတ်အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် themes များနှင့်အတူ, ဒီပစ်ခတ်မှုဂိမ်းနာရီစွဲသငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့သေချာပါသည်။
ပစ်မှတ်နှင့်အကြီးအကျယ်သေနတ်အဆင့်မြှင့်၏ကွဲပြားအခက်အခဲနှင့်အတူလက်တွေ့ 3D ပစ်ခတ်မှုသင်တန်း။ ကြောက်မက်ဘွယ်လက်နက်များသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်လက်နက်တိုက်အတွက် Evolution သူတို့နှင့်အတူ upgrade ။ ပြန်ကန်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်မားနယ်ပယ်နှင့်အတူထူးခြားတဲ့, စိန်ခေါ်မှုနှင့်အစွဲလမ်းအဆင့်ကိုဒီဇိုင်း။ သင်ဤကြောက်မက်ဘွယ် fps ရိုက်ကူးဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်စွန့်စားမှုရန်ပြင်ဆင်ထားပါသလား? ယခုအရေးယူမှုသို့ Get နှင့်ဤထိပ်တန်းရိုက်ကူးဂိမ်းအတွက်စွန့်စားမှုပျော်မွေ့! သင့်ရဲ့သင်တန်းနှင့်လုပ်ရပ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ!
တစ်သေနတ်သမားများနှင့်အနိုင်အထက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, အံ့ဖှယျရိုက်ချက်များဖန်တီးသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်, သင်၏မြင့်မားသောရမှတ်တည်ဆောက်ကြလော့။ ရဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးမာစတာဖြစ်လတံ့သောကြည့်ရှုကြပါစို့။
- စနိုက်ပါသေနတ်, ရိုင်ဖယ်, ပစ္စတိုစသည်တို့ကိုနှင့်အတူရီးရဲလ် 3D သေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကို
- အခက်အခဲတိုးမြှင့်ဖို့ပစ်မှတ်လှည့်, Moving
- သေနတ်သမားရန် variable ကိုအကွာအဝေးနှင့်အတူပစ်မှတ်
- က Ultra-အတိုငျးသေနတ်သမားအသံ
- ဆွဲဆောင်သော graphical ဆိုးကျိုးများ
- အမြင့်ဆုံး headshots များအတွက်ကွဲပြားရမှတ်နှင့်အတူ Ragdoll ပစ်မှတ်,
- သစ်တော, Fairway, နှင်းစတာတွေနဲ့တူမတူကွဲပြားခြင်း themes များ
Shooting Master 3D အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Shooting Master 3D အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Shooting Master 3D အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Shooting Master 3D အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.86k 6.83M
Shooting Master 3D ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Shooting Master 3D အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1
ထုတ်လုပ်သူ Timuz Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://timuz.com/mobilegames/privacypolicy.html
App Name: Shooting Master 3D
Release date: 2019-07-12 18:26:51
လက်မှတ် SHA1: 59:31:3E:28:69:B7:2D:FA:79:5E:25:64:C9:EF:2F:62:16:DB:3A:9D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): timuz solutions
အဖွဲ့အစည်း (O): timuz
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Andhrapradesh
Shooting Master 3D APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ